Garoonka diyaaradaha Jowhar oo laga soo celiyay Sarkaal NISA oo loo magacaabay Gobolka Sh/dhexe | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Garoonka diyaaradaha Jowhar oo laga soo celiyay Sarkaal NISA oo loo magacaabay...
Garoonka diyaaradaha Jowhar oo laga soo celiyay Sarkaal NISA oo loo magacaabay Gobolka Sh/dhexe
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Jowhar ee Caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarad siday Sarkaal ka tirsan NISA oo loo Magacaabay hoggaaminta Ciidanka NISA ee Shabeellaaha dhexe in laga soo celiyay Jowhar.
Sidda ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay Sarkaal waxaa magacaabay Ku simaha Taliyaha Nabad Suggida Soomaaliya ahna Taliye Ku xigeenka NISA Fahad Yaasiin, waxaana la sheegay Garoonka Diyaaradaha Jowhar inay u diideen inuu ka dago Ciidan Militari ah oo ku hayb ah Sarkaalka haysta Nabad Suggida Gobolka Shabellaha dhexe.
Dadaalo kala duwan oo la isku dayay in Sarkaalkaasi uu u gudbo Magaalada gudaheeda ayaa ugu dambeyn suurageli wayday, waxayna taasi keentay in dib uu ugu soo laabto Magaalada Muqdisho Sarkaalkii dowladda u magacowday Ciidamada NISA ee Gobolka Shabellaha dhexe.
Madaxweynaha Hirshabelle ayaa labo bil ka hor wuxuu magacaabay Taliyaha NISA ee Shabellaha dhexe, kadib markii xilkii laga qaaday Taliyihii hore oo lagu magacaabi jiray C/qaadir Cabdulaahi Xaayow, waxaana xilkaasi loo magacaabay Sarkaal lagu magacaabo Macalin Aadan.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in Hirshabelle aysan ku qanacsaneyn in loo soo magacaabo Taliyaha Nabad Suggida Gobolka Shabellaha dhexe, xilli uu joogo Sarkaal Madaxweynaha Hirshabelle uu magacaabay, balse labadii bilood ee la soo dhaafay Saad & taageero uu ka waayay dowladda Soomaaliya.